Ka Haynta Xayiraadda Tacliineed: Tilmaamaha laga bilaabo Semptarka
Tilmaamahan waxaa loogu talagalay inuu kaa caawiyo in aad cirib tirto xannibaadda nidaamka infekshanka ku dhacay haddii ay si fiican u bilaabi karto. Haddii aad ka shakisan tahay in nacaybka uu ku dhacay infekshanka waa Crypto (Cryptolocker, TeslaCrypt, iwm) markaa hage tani maahan adiga. Xogtaadu waxay ku jirtaa qatarta oo waa inaad sameysaa boostada. Haddii kombiyuutarkaagu aanu ku jirin awood uu kuqorsho natiijo xumo, waxaa lagugula talinayaa inaad sameyso boosto maadaama tilmaan-bixiyahan uusan noqon karin caawimaad.
Haddii aad fuliso nidaamka soo socda, oo ay bixiso khabiirada Sare , Julia Vashneva, waxaad awoodi doontaa inaad xalliso caqabadahaaga in ka badan 90 boqolkiiba dhacdooyinka. Taasi waxay qeexday, naqshadeynta nacfiyada oo dhan ma ahan mid la mid ah isla markaana kiiskan, qaabaynta qalabka feylka ee isku mid maahan - gallery software.
Waxbarashada xigta waa talooyin. Adiga ayaa mas'uul ka ah wax kasta oo aad dooratid inaad ku fuliso kombuyuterkaaga. Waxaa muhiim ah in la ogaado in aad dhaawici karto hawlahaaga ama khibradda khasaaro la'aanta ee kiiskaaga aad go'aansato inaad raacdo tusahan. Sidaa darteed, waxaa lagugula talinayaa inaad dib u soo celiso xogtaada ka hor intaadan raacin hagahan.
Talaabooyinka Lagu Xadgudbo Xasaasiga ah
Waa in aad marka hore u tagtaa fidiyahaaga oo kordhiya dhammaan waxyaabaha ku jira shaki. Sidoo kale xasuuso inaad ka saarto goobo aan caadi ahayn iyo goobaha shabakadda.
Soo qaado oo ku rakib qalabka soo socda ee nidaamkaan. Ku dhaq dhammaan qalab haddii aan si kale loo sheegin. Hubi inaad ku jirtid hab caadi ah markaad qalabka wax ka qabanayso.
WAXAAD KA HELI KARAA TALLAABTA HALKAN KA HELI KARAA HADDII AAN HELI KARO MAXKAMADAHA LAGA HELI KARO RISK
1. Hirgelinta [rkill.com]. Xaaladaha qaarkood, waxay qaadan kartaa dhowr daqiiqo si ay u dhammeeyaan..
2. Soo qaado nuqulkii ugu dambeeyey ee Malwarebytes 3.0. Kala beddel "Rugta Rootkits" ka dibna ka dibna samee baaritaan.
3. Isticmaalida "Xulista Iskudhiga wuxuu maamusaa Malwarebytes ADWCleaner kadibna riix" Nadiifinta "markaad dhamaystirto oo aad u ogolaato inaad dib u bilowdo nidaamkaaga.
4. Ku rakib Qalabka Mashiinka Dhibaatada Malwarebytes (Junkware Removal Tool) oo u ogolaanaya inuu dhammeeyo. Kumbuyuutarkaaga dib u bilaabo markiiba.
5. Ku rakib Sophos HitmanPro
Waa maxay Qeexitaanka Nadaafada?
Xannhaqatada oo ku jirta erey la wadaago oo loola jeedo kooxo kala duwan oo ka mid ah codsiyada colaadaha ah oo ay ka mid yihiin gooryaanka kombiyuutarka, fayrasyada, Ransomware, adware, waxyeellada, iyo codsiyada kale ee xaasidnimo.
Sideebaan computerka u qaadsiiyay cudurka?
Way adag tahay in la ogaado ilaha infekshinka dhabta ah. Xaaladaha intooda badan, isticmaalku wuxuu u oggol yahay infekshinimada inaysan aqoonin.
Sida loo ilaaliyo caabuqyada mustaqbalka:
Ku dadaal waxa aad ka soo dejisan karto oo ku ordaya nidaamkaaga. Cusbooneysii barnaamijyada sida Flash iyo Java iyagoo isticmaalaya boggooda rasmiga ah. Qalabka hoos ku qoran ayaa kaa caawin doona inaad nadiifiso kombiyuutarkaaga:
Antivirus lacag la'aan ah
Barnaamijka ESET ee Seddex Bilaash ah
Qalab muhiim ah:
Isku xidhka Browser asalka ah
Xeeladaha lagu taliyey ee tilmaamahan waxaa loo xushay iyadoo lagu saleynayo heerka guusha ay gaadhay heer aad u ballaaran. Laakiin, xaaladaha qaarkood, raacitaanka tallaabooyinkan waxaa laga yaabaa inaanay ku filneyn. Xaaladdan oo kale, waxaa laga yaabaa inaad u baahatid inaad codsato gargaar sare.